Pokémon GO: zvitanhatu zvakajairika zvikanganiso uye maitiro ekuzvidzivirira | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | IPhone mitambo, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Ini ndinorangarira pandakanga ndiri mudiki uye vakaunza mutsva arcade muchina: tese taive tichida kuziva uye tichiridza kutsva kutsvaga kwekuwana epadyo arcade, asi hapana ainyatsoziva kutamba mutambo mutsva uyu. Nekufamba kwenguva, vazhinji vedu takadzidza uye takatozoona hwakawanda hwenhema kupfuudza ese masikirini. Pokémon GO Haina kufanana nemhando iyi yemutambo asi, semazuva ese, mazuva mashoma enyonganiso anoteverwa nevamwe matinodzidza nzira yakanaka yekutamba.
Pokémon GO yakasvika kuSpain, Italy nePortugal neChishanu chapfuura, saka isu taingova nemazuva 3-4 ekuridza zita renguva yacho. Izvo isu tese zvatinoita kana isu tikatsvaga mutsva mutambo ndeyekutamba tichikanganwa zvese zvimwe, asi tisingafunge nezve zvimwe zvinhu zvinogona kutinonotsa isu. Munyaya ino tichataura nezvayo zvikanganiso zvakasiyana siyana zvatinoita zvese kana uchitamba ichangoburwa hit yakagadzirwa naNiantic.
1 Dzima AR modhi kana uchivhima muPokémon GO
2 Kanganwa nezvekuchavira mazai nekutyaira
3 Shandisa Pokémon GO Battery Saver
4 Teerera kune iyo FENCE tebhu
5 Simudzira mudzidzisi wako, kwete yako Pokémon
6 Tora mukana wezvinhu nekuchenjera
7 Bhonasi: pinda mukati uye kunze kwemutambo nguva nenguva
Dzima AR modhi kana uchivhima muPokémon GO
Zviri pachena kuti zvinonyanya kutaridzika kuvhima Pokémon mu "nyika chaiye" pane mufananidzo wakagadzirwa nekombuta, asi izvi ndizvo zvakanakisa zvekushanduka kwedu semurairidzi? Aiwa hazvisizvo. Kana isu takaita kuti iyo Kuwedzera Kwechokwadi Kana tichivhima Pokémon, isu tichafanirwa kuvawana nekamera ye iPhone yedu uye, kana tango tarisa pairi, chengetedza nharembozha munzvimbo imwechete. Kana zvikazoitika kuti, semuenzaniso, tiri kutamba kubva pamubhedha kuti tione kana tichiwana Pokémon yatisina tisati tarara, iwe unzwisise zvandiri kureva.
Si tinobvisa ARPanzvimbo peiyo yepasirese yepanyika chaipo, kumashure kwesango kuchaonekwa, neine masikati uye nerima husiku. Kuvhima Pokémon kunenge kuri nyore, isu tichawana zvakawanda uye isu / avatar yedu tichava mudzidzisi ari nani. NeAAR yakamisikidzwa zviri nyore kwazvo kuti vatitize (hongu, vanopunyuka, asi pamatanho epamusoro).
Ah, sarudzo kana switch inoonekwa pane iyo kumusoro kurudyi apo isu tichazobata Pokémon.
Kanganwa nezvekuchavira mazai nekutyaira
Vagadziri vePokémon GO vakurudzira kuti tifare, asiwo izvo ngatibudei mumugwagwa uye hatisi kugara takagara nenharembozha kana tablet. Izvi zvinonyanya kukosha kana mazai achangobva, rudzi rwe "kushamisika" uko kunotimanikidza kufamba 2-5km kuti Pokémon itsemuke uye ioneke.
Zviri pachena kuti panenge pasina munhu anofarira kufamba nekuda kwekufamba. Hongu, kune vanhu vazhinji vanofamba vachiita mitambo, asi mune iyi nyaya, mutambo chinangwa chakajeka. Chinhu chakasarudzika ndechekuti vazhinji vedu tinoda kutora rwendo rwemotokari kuitira kuti mazai atsvage, asi izvi hazvishande. Kwemakiromita kuverenga, isu tinofanirwa kuenda nespeed isina kusimbiswa, asi zvinoita sekunge iyo kaunda inomira kana tikapfuura 40km / h nezve. Munyama. Chinhu chakanakisa chezviitiko izvi kuenda nebhasikoro. Izvi zvinonyatsoshanda.
Shandisa Pokémon GO Battery Saver
Kana isu tichitaura nezve izvo isu zvatingade izvo nyowani iPhone (kana imwe smartphone) kuti isanganise, isu tinogara tichitaura bhatiri. Pokémon GO mutambo uyo inoshandisa GPS kutinyevera nenzira yekudengenyeka kana paine Pokémon padyo. Zviri pachena kuti izvi zvinogona kuve zvakanaka kana Pokémon GO iri yedu hobbie kufarira, asi hazvizove zvakadaro kana isu tichida mbozhanhare yedu kunakidzwa kuzvimiririra kwakanaka.
Kana isu tikamutsa iyo modhi Bhatiri saver, iyo GPS ichagadziriswa kana tisina mutambo unomhanya kumberi.
Teerera kune iyo FENCE tebhu
Icho chimwe chezvaishoma zvinoratidza kuti mutambo unotipa, saka zvinoita kunge zano rakanaka kusazviteerera. Muzasi kurudyi isu tine sarudzo PEDYO izvo zvinotitaurira iyo Pokémon iyo yakatikomberedza kusvika pahupamhi hwe 9. Iyo yakanaka ndeye kuvhura iyo tabu nguva dzese dzatinopinda Pokémon GO kuti tione kana paine chimwe chinhu chatisati tabata. Kana isu tikaona kuti Pikachu inowoneka uye isu hatina iyo, inogona kunge iri zano rakanaka kutora famba uchitenderera nzvimbo yatiri.
Neizvi zvakatsanangurwa, ndinodawo kutsanangura kuti iyo kurongeka kwekuva pedyo Izvo hazviratidzike sekunge isu taive kuverenga chinyorwa kuWest, kana zvisiri sekunge taive tichiverenga muJapan. Iwo marongero ehukama sezvawakaita iwe mune yapfuura kubatwa.
Simudzira mudzidzisi wako, kwete yako Pokémon
Anonakidza zano, handiti? Kuti kunatsiridza murairidzi kana iyo Pokémon ichirwa? Zvakanaka, nekuti izvi zvinoenda nematanho, isu hatisi kutaura nezve iyo Pokémon akateedzana kana mabhaisikopo. Zvinhu zvinonakidza zvikuru zvinoitika kubva panguva iyo murairidzi anosvika padanho 8. Semuenzaniso, Frambu Berries anotanga kuoneka muPokéStops.
Ichi chinhu chandiri kuudza shamwari kuburikidza neMessage izvozvi (mhoro, David 😉): «Usape candy kuKokémon kunze kwekunge kuri kwavo kushanduka izvozvi. Kana iwe ukavandudza murairidzi wako unogona kuwana yakasimba Pokémon kupfuura iyo iwe yauri kugadzirisa uye zvese zvawakapa iwe unenge warasikirwa. Ichi ichokwadi: iwe uri nani mudzidzisi, iwe uri nani Pokémon iwe yaunovhima. Kana tikashandisa zviwanikwa zvedu, toti, Eevee, isu tinokwira kumusoro nekuvhima imwe yakanyanya kureba Eevee chaipo mushure, chii?
Naizvozvi zvakatsanangurwa, isu zvakare tinofanirwa kutsanangura kuti mangani mapoinzi chinhu chimwe nechimwe chinopa:
Kubata Pokémon kunopa zana XP (ruzivo) mapoinzi. Izvi zvinoreva kuti izano rakanaka kutora zvese zvatinoona. Kana zvikazoitika kuti isu takabata Pokémon yatinayo muhutatu, tinogona kuendesa isina kusimba kune purofesa.
Tora Pokémon kekutanga: 500 XP.
Hatch Pokémon: 200 XP.
Bata ne PokéStop: 50 XP. Nekudyidzana, ndinoreva kunhonga zvaunofanira kutipa.
Shanduka Pokémon: 500 XP.
Tora mukana wezvinhu nekuchenjera
Muchikamu chakapfuura takataura nezve ruzivo rwezviitiko zvemurairidzi. Semuenzaniso, kuchinja Pokémon kunotipa 500 XP. Asi ko kana tikazvichinja ne raki rakanaka kusashanda? Zvakanaka, ichatipa 1.000 XNUMX XP. Kana tikaita izvi neakawanda Pokémon yatakatsungirira tisingashanduke, tinogona kuwana mamwe akawanda mapoinzi.
Kune rimwe divi, isu zvakare tine iyo Frambu Berries, muchero unozoita kuti Pokémon ive yakati rebei. Mune ino kesi hatichataura kuti tinofanira kuishandisa zvine hungwaru, asi zvinopesana: izvo zvatisingafanirwe kuita hupenzi hwekushandisa imwe yemabriji aya kutsvaga Rattata neCombat Power (CP) ye 10-12 anonongedza nekuti isu tichave tichipambadza uye isu tingaida iyo yekuvhima ine simba rakanyanya Pokémon.
Bhonasi: pinda mukati uye kunze kwemutambo nguva nenguva
Ok, zviri pachena kuti rairo iyi haigone kuve yakanyatsoita mushe kana maseva akarovera nekuti isu tinogona kusara tisina kupinda zvakare kwenguva yakareba. Asi isu hatifanire kukanganwa kuti Pokémon GO isoftware uye, senge chero chirongwa, inofanirwa kugadzirisa data. Iwe unogona kushamisika kangani Ini ndinovhara mutambo kubva ku multitasking kuona kuti akasiyana Pokémon aonekwa akandikomberedza. Pamwe ivo vachazogadzirisa izvi mune ramangwana, asi icho chinhu icho, semuenzaniso, ini chaakaita kutora poindi yekuchengetedza bhatiri uye ini ndakabata hapana isingasvike 4 Pokémon (Ponyta, Venonat, Geodude uye Growlithe), mumwe wavo izvo hazviiti ndaive nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Zvitanhatu zvikanganiso zvaungave uchiita kana uchitamba Pokémon GO
Iko kukanganisa kwekutanga kuiisa uye kutamba nayo ...
Mhoroi, Pablo. Ini handinzwisise yekupedzisira bhonasi chikamu. Iwe unoreva kuvhara iko kunyorera kana kubuda kunze kwevanodzidzisa Pokemon / account yeGoogle ??? Hazvina kunyatsojeka ...
Mhoroi, iphonemac. Ndiri kureva kuvhara iko kunyorera kubva kune multitasking (ikozvino ini ndinowedzera iwo mavara seizvi). Ini handina kukwanisa kutaura kuti sei, asi inzira yekumumanikidza kuti atange, aite kuverenga, nezvimwe, uye Pokémons anowanzoonekwa. Sezvandambotaura mune ino posvo, pandakapinda kuti nditore skrini yeiyi post, 4 yakaonekwa.
Ale Carp akadaro
Mhoro kune nokia limia mutambo wacho wakakodzera .. Ini ndoda kuziva nekuchimbidza .. !! ndatenda
Pindura kuna Ale Carp
Jose gomez akadaro
Mhoroi, ndinoda kuziva kuti ndomisa sei ra raini sezvo ndine dambudziko rekuti pandinoenda kunobata pokemon ndinotemerwa zita panguva yekuzviita sezvo ra ichiitwa otomatiki uye iyo ra inopedza gondohwe rese ndangariro ndakamaka uye ndiri Vhara mutambo zvakangoitika kwandiri kuti ndangariro yangu yakanditsungirira ndichida kubata imwe, ndakabuda ne ra activated ndakazvimisa kubva kumusoro uye ndaigona kutamba pasina dambudziko asi zvinoitika kwandiri kuti nguva zhinji inoitwa zvakare hapana nzira yekumisikidza iyo yakazara nzira sezvo izvi zvichikanganisa ndangariro yangu gondohwe.
Pindura kuna Jose Gomez
Pamusoroi, iko kunyorera kunovhara uye hakumhanye
Apple inoburitsa iOS 9.3.3, watchOS 2.2.2, uye OS X 10.11.6 ine zvigadziriso zvidiki